Shiinaha soosaarayaasha ilig baaldi baaldi Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | MINYAN
Qalabka Kaqeybgalka Dhulka wuxuu ilaaliyaa qaybaha qaaliga ah ee baaldiyadaada cimriga dheerna wuxuu yareeyaa kharashka dayactirka. ilig baaldi qodista ayaa sidoo kale qayb weyn ka ciyaara go'aaminta sida ugu wanaagsan ee mashiinkaagu ugu shaqeeyo codsi gaar ah.
Kartida BixintaKartida Bixinta:500000 Ton / Ton bishiiBaakad & GaarsiinFaahfaahinta Baakadaha: Khaanadaha Alwaaxda ahDekedda: Qingdao, Lianyungang, ShanghaiWaqtiga Lead:
Caddaymaha ilkaha baaldi:
Waxyaabaha: Birta kaarboon, birta dahaarka leh, iwm, sida T1, T2, T3, T4.
Nooca mashiinka: Excavator, Loader Wheel, Bulldozer, iwm.
Noocyo: DHAMMAAN CAYAARAHA
Daaweynta kuleylka: Deminta iyo xanaaqa daaweynta
Engegnaantiinna: Ilkaha: HRC48-52, Qiimaha Saameynta> = 16J; Adapters: HRC34-38, Qiimaha Saameynta> = 25J
Xaaladda shaqada: leh dheereyn heer sare ah iyo xoog is jiidjiidasho, aadna ugu habboon xaalado badan oo shaqo adag oo kala duwan.
Faahfaahinta ilkaha baaldi:Waxaan inta badan bixinaa qalabka dayactirka ee Excavator. Sida baaldiga dhagaxa qodda, baaldi shaandhada qoda, qoda ilkaha baaldi, ripper qodista, geesaha goynta, qodayaasha dhaqso qodayaasha iwm. Sumadda aan ku bixin karno dhammaan noocyada. Suuqayagu inta badan waa adduunka oo dhan, sida USA Canada, South Africa, Brazil, Chile, Egypt, Sudan, Singapore Middle East. iwm oo ku takhasusay qaybaha mashiinada dhismaha sida ilkaha baaldi, ripper qodista, geesaha jarista, qodista dhaqsaha qotada iyo wixii la mid ah. Waxyaabaha: Birta kaarboon, birta daloolka, iwm, sida T1, T2, T3, T4. Nooca mashiinka: Excavator, Loader, Bulldozer iwm qiime> = 16J; Adapters: HRC34-38, Impact value> = 25J Xaaladda shaqada: oo leh dheereyn heer sare ah iyo xoog is jiidjiid, aadna ugu habboon xaalado shaqo oo badan oo kala duwan.
Waxaan bixin karnaa noocyo kala duwan oo ah Ilkaha baaldi ee Qodda:
Khadadka Alaabta1. Warshadaha Teknolojiyada: Sax Sax2. Qalabka: Alloy steel3. Badeecadahayaga saxda ah ee saxda ah waxay qaataan sodium silicate geedi socodka shubista wax qoyan, xakamaynta otomaatiga ah ee daaweynta kuleylka, rinjiga buufin ee qoyan iyo nidaamka qalajinta otomaatiga ahFaa'iidadaKhibrad sannado badan leh injineernimada mashiinka injineernimada.Suuqayaga weyn: Shiinaha oo dhan, Bariga Dhexe, Afrika, Koonfur Afrika, Ameerika iwm.3.Na iibin kaliya sheyga, laakiin sidoo kale u qaabeyn kara sida macaamilka codsigiisa.4. Iyada oo leh badeecooyin kala duwan. Jaale, cagaar, midab ikhtiyaar ahaan.5. Tayada waxaa damaanad qaada xirfadle shaqaalaha, shaqaale daacad ah iyo kooxda QC.6. Qiimaha warshadda, tayo aad u fiican, adeeg xirfadeed.7. Waxaan ku dhejin karnaa astaantaada iyo astaamahaaga sheyga tiro aad u tiro badan.Waqtiga dhalmada oo yar: 30 maalmood halkii weel 20ft.
Weydii oo ka jawaab S: Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama soo saare?J: Waxaan nahay warshad.S: Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?J: Guud ahaan waa 5-10 maalmood haddii alaabtu taallay. ama waa 15-20 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, waa hadba tirada.S: Shaybaar ma bixisaa? ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?J: Haa, waxaan ku bixin karnaa muunada lacag la’aan laakiin ma bixinayno kharashka xamuulka.S: Waa maxay shuruudahaaga bixinta?J: Bixinta <= 1000USD, 100% ka hor. Bixinta> = 1000USD, 30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor rarka.
Nala soo xiriirHaddii aad hayso su'aal kale, fadlan si xor ah ula soo xiriir sida hoos ku qoran:WeChat: +86 13270253222Website: www.Talooyin: Waxaan kaa samaysan karnaa astaan ​​iyo summad tiro badan.Qanacsanaantaadu waa ujeedkeena ugu dambeeya, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto.
Waxaan sidoo kale soo saarnaa:
Hore: qodista waxay xoojisaa baaldiga dhulgariirka
Xiga: excavator deg deg ah coupler